AKHRI: Dadkii Isticmaalay ‘Faceapp’ Oo War Naxdin Leh Loo Sheegay – HCTV
AKHRI: Dadkii Isticmaalay ‘Faceapp’ Oo War Naxdin Leh Loo Sheegay
Cabdiqaadir Carab 0	December 3, 2019 12:38 pm
Deg Deg : Talis Cusub oo La wareegay Xukunka Suudaan iyo Madax Sare oo La Xidhay.
Munaasiba Ay Ku Qalin Jabinayeen Arday Ka Qalin Jabisay Machadka Kuwaytiga Oo Ka Dhacday Magalada Hargaysa.
Ceel Biyood Laga Hirgaliyay Deegaanka Hadhwanaag Ee G.Sool
Saudi Arabia Oo Loo Ogolaaday Samaysashada Quwada Nuclear-ka
Guddida Qabanqaabada Shirweynaha Kulmiye Oo La Magacaabay
USA (HCTV) – Hay’adda dambi baadhista federaalka Mareykanka ee FBI-da ayaa sheegtay in adeegga FaceApp iyo kuwa noociisa ah ee lagu sameeyay waddanka Ruushka ay sababi karaan “khatar weyn oo dhinaca sirdoonka ah”.
Hadalkan ayaa lagu sheegay warbixin loo diray Senetor u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Chuck Schumer, kaasoo hore uga dalbaday FBI-da inay baadhitaan ku sameyso arrintaas.
Barnaamijkaas wejiyada dadka lagu baddalo ayaa aad loo isticmaalay horaantii sanadkan, balse wuxuu markii dambe dhaliyay walaac la xidhiidha dhinaca sirta shakhsiyadeed.
Warka ka soo baxay hay’adda FBI-da ayaa yimid xilli Mareykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah uu ka taagnaa walwal la xidhiidha khatarta amni ee ka dhalan karta teknoolojiyadda ay adeegsadaan waddamada dibedda.
Warqadda loo diray Mr Schumer, ayey hay’addu ku tidhi “Waxay arrintan khuseysaa barnaamij kasta oo telefoon lagu soo dajisan karo ama wax kasta oo noocaas ku saabsan oo lagu farsameeyay gudaha Ruushka, sida FaceApp, waxaana laga yaabaa inay keenaan halis dhinaca sirdoonka ah”.
Arrintan ayaa ka dhigan in barnaamijyadaas lagu xadi karo xogta dadka isticmaalay, sidoo kalena sawirradoodu ayna amnigooda sugneyn.
FBI-da waxay kale oo sheegtay inay tallaabo qaadi doonto haddii ay hesho wax caddeymo ah oo muujinaya in sirdoonka waddamada qaar ay faragalin siyaasadeed sameynayaan iyagoo adeegsanaya barnaamijyada ceynkaas ah.
Hore waxay shirkaddaas u sheegtay inayna keydinin sawirrada dadka isticmaala barnaamijkeeda, wax xog ahna ayna arurinin.
Iyagoo faahfaahinayay sida aanu walaac uga iman karin adeeggooda ayey sheegeen in sawirrada ay falgaliyaan kadibna ay iska masaxaan.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka Senate-ka Mareykanka, Mr Schumer ayaa bishii July codsaday in la baadho hannaanka uu ku shaqeeyo barnaamijka FaceApp ka dib markii walaac aad u xooggan la muujiyay.
Mareykanka gudihiisa ayaa hadda si weyn looga cabsi qabaa khatarta ka iman karta tiknoolijiyadda dibedda.
Caannimadaas ballaadhan ayaa sababtay walaac ku abuurmay suuqyada waddammada reer galbeedka, maaddaama adeeggaas laga leeyahay Shiinaha.
Sharcidajiyeyaasha Mareykanka, oo uu ka mid yahay Mr Schumer, ayaa bishii October dalbaday in hay’adaha sirdoonka ee waddankaas ay sameeyaan tijaabooyin la xidhiidha khatarta ay adeegga TikTok iyo kuwa kale ee laga leeyahay Shiinaha ku keeni karaan amniga qaranka.